Ngubani umklami graphic?
Isikhangiso, Graphic design
Design - ingenye imikhakha ethandwa kakhulu ezweni lethu. Ubani nje musa bazibiza umklami, kusukela sina site onjiniyela futhi liphetha ngamazwi manicure evamile. Nokho, iningi ukuthi akekho umklami wangempela uwukuthi umklami graphic.
Ngokuhamba kwesikhathi sethu kudlangile computerization matasa ephepheni kwakungamadodana okuningi abaculi. Zonke ezinye amakhono okuhlobene nakho, sekuyisikhathi eside ncane computer. Ayikho ngaphandle, futhi umklami graphic. Nakhu owenza lo muntu: "Ngokwesayensi", "inikeza imisebenzi yobuciko kanye nomklamo ukudala obunobunye futhi ngempumelelo ezibukwayo zokuxhumana imvelo." Empeleni, konke akukubi kangako, isimu yomsebenzi wabo - izincwadi, omagazini, ukukhangisa, namawebhusayithi. Kuyinto lezi zazi ukuthuthukisa Idizayini yokubuka zamakhasi ewebhu, omagazini nezincwadi, amafonti, okuyinto ezinyatheliswe emaphephandabeni.
Ukuze isebenze kahle emkhakheni design, kubalulekile ukuba nolwazi emkhakheni abahleli isithombe, ulimi Pearl ekhethekile, Java izinhlelo hlobo. Kudingeka nokuba ukwazi izinto eziyisisekelo bekhompuyutha sokushicilela futhi ukuhlelwa izilimi - HTML, i-XML, kanye nabanye. Kulokhu, ihluzo umklami ungasebenzisa izithombe ngomumo eyenziwe, izithombe kanye okubhaliwe. Umgomo wakhe awukona ukubhala imibhalo noma ukudubula. Kumelwe siqiniseke ukuthi lemibhalo izithombe ahanjiswe ku-intanethi noma ukuphrinta ekukhanyeni elihle kunawo, enhle, umxhwele futhi engavamile. Yilokho injongo uchwepheshe graphic design.
Kungenzeka ukuthi ngemva ukudluliselwa imisebenzi uyazithanda ngempela ubungcweti "umklami graphic." "Lapho ukufunda lesi okukhethekile?" - ngokwemvelo ubuza. Manje kukhona inala izifundo, elikhiphe ezidingekayo "uqweqwe", neminyango eziningi nobuciko bokunyathelisa namanyuvesi yezakhiwo futhi waqala ukuveza ochwepheshe anjalo. Ngokuvamile, ungabheka ngokuyinhloko kubo. Nokho, ulwazi ukuthi uzothola ngaphakathi kwezindonga izikole, ngeke kuqinisekise impumelelo yakho graphic design. Ngoba kuqala kunazo zonke amakhono isifundo senzeka kakade inqubo. Yingakho inqwaba Ochwepheshe Russian e graphic design akudingeki diploma kwalomsebenti Nokho, okuyinto, akuvimbeli ukuba asebenze ngempumelelo.
Ngokuvamile, ubuso ulwazi lwakho kule mkhakha kuyoba iphothifoliyo yakho umklami graphic - iqoqo amaphrojekthi yimpumelelo kakhulu kulo mkhakha, okuye ezalethwa wena uqobo. It futhi wona wodwa uzokutshela mayelana amakhono akho ingcono kakhulu kunanoma iyiphi idiploma kanye nezincomo. Ubokhumbula njalo-ke, nje ukusebenza kanzima kanye self-ngcono ngeke ube umklami ezinhle ngempela. Ngokungangabazeki, ngeke sikwazi ukwenza lo msebenzi ngaphandle umcabango ezicacile, ikhono ukubheka izinto engavamile ngombono kanye nomuzwa isitayela.
Zonke lezi zimfanelo, futhi ngenxa yalokho i umsebenzi ezithakazelisayo futhi eyinkimbinkimbi ezinjalo - umklami graphic. Uma ufuna ukuzama ngokwami kule mkhakha, imisebenzi kanye wonke uthola!
Ukukhangisa ku izimoto
Ikhadi Corporate - Khetha iphepha design - Print
Ukukhangisa Outdoor e Penza
ELC (Early Learning Centre): sha edumile emhlabeni wonke manje eRussia!
Indlela yokwenza indiza radio-elawulwa ngezandla zabo
Igama SOKB vd Seredavina: umlando, imisebenzi. Isibhedlela Seredavina (Samara): Izibuyekezo
Ukuhlola Pedagogical sikhungo zasenkulisa zemfundo